ဖြေပေးကြပါဦးဗျာ။ — MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life
January 2012 edited January 2012 in Daily Life
ကျွန်တော် TP Link Usb wifi adapter အတွက် (TL-WN422G_v2_100611) driver and tp link wireless client utility software တင်လိုက်တာ windows xp service park3(v2c47-mk7jd-3r89f-d2kxw-vpk3j) လေးက genunie မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ logo က task bar ရဲ့ အပေါ်လေး မှာပေါ်လာတယ်။ နောက်ပြီး log on ဝင်တာနဲ့ resolve now or resolve later ဆိုပြီး ပေါ် လာတယ်။
လောလာဆယ်တော့ resolve later လုပ်ပြီဘဲသုံးနေရတယ်။ ကြာလာရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။ windows သုံးမရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်လားဗျ။ ကူညီကြပါဦး။ အဲဒီ wireless utility ကိုတင်တုံးကတော့ kasper က
block လုပ်မလားမေးတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါတင်မှ ရုံးမှာလွှင့်ထားတဲ့ wifi ကို usb adapter တပ်လိုက်တာနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘဲ တန်းသုံးလို့ရတာ။ မဟုတ်ရင် အနားမှာရှိတဲ့တခြား connection တွေပါ ပေါ်နေပြီး ကိုယ့်ရုံး connection ကို ရွေးပြီး connect လုပ်နေရလို့ kasper warning ကို allow လုပ်ပေးလိုက်တာအခုလိုဖြစ်သွားတာ။ အဲဒီ driver and utility ကလည်း adapter ဝယ်တုံးကပါတဲ့ ဟာမရှိတော့လို့ tp link site ကနေ download ဆွဲပြီး တင်လိုက်တာပါ ဗျာ။ ဖြေရှင်းနည်း လေး သိသူများ
အမြန်ဆုံး အကူအညီပေးကြပါဦးဗျာ။ :-((
Genuine မဖြစ်လည်း ကြာလာရင်သုံးလို့မရတော့တာမျိုးမဖြစ်ပါဘူး...
Window ကို genuine အနေနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ myanmar blog အချို့တွင်လည်းgenuine ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ Software တွေရပါတယ်..
wireless adapter driver ကvirus ပါတယ်လို့သံသယ၀င်နေရင်
ကျေးဇူးပါ sayarjunjun ကျွန်တော် Windows.Genuine.Advantage.Validation.(WGA).v1.9.9.0
ဆိုတဲ့ software လေးနဲ့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။